Azerbaijan: Fomba fijery avy ety ivelany. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2010 13:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, srpski, Italiano, македонски, Ελληνικά, English
Sary nalaina tao amin'ny http://shekiazerbaijan.blogspot.com/
Ho an'ireo izay mipetraka any amin'ny firenena somary miavaka amin'ny rehetra, dia maro ireo zavatra azo raisina ho tena misy tokoa. Nefa raha ny hafa avy any ivelany no mahita izany voalohany, dia matetika izy ireo mahita loko sy fomba amam-panao hafa. Vokatr'izany dia mahafantatra zava-baovao izy ireo.
Tao anatin'ny lahatsoratra famelabelarana iray ohatra, i Meaning Full (Misy lanjany) dia mamelabelatra ny fiainana tao Azerbaijan, ny repoblika tao anatin'ny Sovietika teo aloha any Kaokazy Atsimo, manan-karena ara-tsolika, tany atsimon'ny Kaokazy ary miresaka mikasika ny endriky ny fiainana eo amin'ny lafiny kolotsaina sy ny zava-drehetra momba ny fandinihana ny Silamo ary ny maha-lahy na vavy. Nilaza ilay Portigey iray mpitoraka blaogy hoe nahatsiaro tena ohatran'ny tany anaty angano izy tamin'ireny fotoana ireny.
Tsy azoko an'eritreritra mihitsy ny zava-drehetra fa ndeha hatao hoe sahala amin'i Alice nivahiny tany amin'ny Tanin'ny Nofy (Alice au pays des Merveilles) aho mankany amin'ny firenena izay mbola vaovao be amiko. Ny marina dia maro tokoa ireo zavatra tsy mahazatra ahy, kanefa dia mahafinaritra foana ity firenena ity nohon'ny hatsaram-panahin'ny vahoakany sy ny hafanana ary ny fahaizany mandray olona.
Ny zavatra hitako soritra mazava tsara – ao amin'io tanànan'i Azerbaijan io, […] dia ny habetsahana, ny fandresen'ny lahy amin'ny isa, ary ny fitobian'izy ireo. Lehilahy, lehilahy, lehilahy, na aiza na aiza aleha. Vitsy ireo vehivavy hita eny an-dalana, vitsy ireo vehivavy manao zavatra, raha any ivelany indray, dia mbola vitsy koa ireo miasa amin'ny hotely. […]
Toa maniry mafy ho lasa firenena mivoatra ny vahoaka ao Azerbaijan . Efa imbetsaka aho no nahatsapa izany ary teo amin'ny sehatra maro ihany koa. Toa ohatran'ny miezaka ny manatratra ny fizotry ny fiainan'ireo any ivelany sy “miezaka manenjika ny hafangainam-pandehan'ny lamasinina any ivelany” ny governemanta sy ny rafitra ampiasain'ireo mpitondra. Noraisina ho toy ny firenena “Islamika tony fihetsika” i Azerbaijan. Ny zavatra voalohany indrindra nanontaniako an'i Rachad, ilay mpanoro lalana anay avy any Azeri, dia ny hoe tokony ohatran'ny ahoana ny fomba fiakanjoko. Pataloha fohy ve? Tokony hanao t-shirts tsy misy tanany ve aho? Hoy izy namaly ahy hoe Azerbaijan dia firenena mivoatra!
Na izany aza, dia nahatsapa ny mpitoraka bilaogy iray fa niahiahy ny fisian'ny olana teo amin'ny resaka fandriampahalemana izy talohan'ny nahatongavany, nefa nilaza izy fa toa tsy hita tampoka izany nony injay tonga tao amin'io firenena io izy. Ary na dia nahatsapa ny olana sasany mpahazo ny firenena Islamika mampihatra ny fanjakan-dehilahy sy tony fihetsika aza izy, dia nahavariana azy ny fientanentanan'i Baku renivohitra sy ny mponina ao aminy.
Raha nankao an-drenivohitr'i Azerbaijan, Baku, aho dia tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe ohatran'ny ahoana re izany e. Somary niahiahy aho ny amin'ny hoe afaka handeha irery am-pilaminana ao anatin'io tanàna io ve aho sa tsia. Nisinda teo ny ahiahiko, raha nanolo-tena an-kalemem-panahy ilay namako antsoina hoe Farida mba hitarika ny lalàko. Nanam-bitana aho ary afaka nankafy ireo faritra natokana handehandehanana tao amin'io tanàna io. Maro dia maro tokoa ireo zaza amam-behivavy sy ny mpianakavy mandehandeha ao, maka aina sy mankafy ny hatsaran'io tanàna io. Maro ireo rano mifantsitsitra sy ny zaridaina madio tsara ery, ary amin'ny alina dia maro ireo olona no mandehandeha eny amoron'iny ranomasin'i Caspian izay tony sy midadasika ary lava dia lava iny. […] Henoko ny famindran'ity tanàna ity rehefa mamindra sy miaina izy, tena mankafy io tanànany io ny mponina ao aminy.
Maro ireo vahiny ao amin'io firenena io no mbola mametraka hatrany ilay olana eo amin'ny fitsinjarana ny andraikitry ny lahy sy ny vavy. Mampifandray ny zavatra niainany niaraka tamin'ny loham-pianakaviana izay vehivavy tao amin'ny tokantrano iray nipetrahany, ary izay nantsoiny am-pitiavana hoe ‘reniko’ izy. Making Wool from Eggs, izay bilaogin'ny vondrona mpilatsaka an-tsitrapo hampanjaka ny filaminana (Peace Corps Volunteer – PCV) tao Azerbaijan, dia nanazava ny zavatra rehetra andrasan'ny fiaraha-monina amin'ny vehivavy ao aminy.
[…] Herinandro mialoha ny fankalazana ny ‘ Thanksgiving’ dia tapa-kevitra ny hanamboatra ‘tarte’ aho ho an'ny fianakaviako. […] Nony tonga tany an-tranoko izahay, dia nanomboka nikarakara ilay paty aho, ary nanomboka namaofy ny paoma i Alise. Nijery fatratra anay ny reniko ary tena sondriana izy mahita ny fahaizako sy ny hakingako mamolavola ilay paty. Tena variana tokoa izy, ary nilaza tamiko izy : “Mahavita zavatra ianao!” […] Niteny tamiko izy fa “efa vonona ho amin'ny fanambadiana aho.” Aty rehefa mianatra ny nahandro ny vehivavy iray dia efa vonona hanambady izy izay ary vonona hahandro sakafo ho an'ny vadiny. Ary ilay namako Alise dia tsy mbola vonona ho amin'ny fanambadiana. Tsy dia azoazon'ny reniko ny fomba famoasany paoma. […]
Ankoatr'izay koa, nazavaina ireo vahiny eto amin'ny firenena hoe afaka iainana amin'ny endriny tsotra indrindra ny fiainana ao Azerbaijan. Nofiso izany, Kasao ary tanteraho! , bilaogy iray hafa koa an'ny PCV , ohatra, dia nizara ny fomba fijeriny ny endriky ny fiainana raha oharina amin'ny an'ireo mponina any Etazonia.
Isan'andro dia manana fotoana hamakiana boky aho, hanoratana, hiasana, handrahoana sakafo maraina, sakafo atoandro sy hariva. Manana fotoana aho hanaovana fanatanjahan-tena isan'andro, hiantsenana eny amin'ny bazary ary mbola manana fotoana ihany koa aho hanamboarana mofomamy. Ny ora fiasako any amin'ny banky dia manomboka amin'ny 9:30 maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Tsy misy fe-potoana farany, tsy misy faneriterena, tsy misy sefo izay manelingelina ny fiainanao ary tsy misy mihitsy ny fiasàna amin'ny faran'ny herinandro. Raha eo amin'ny lafiny fananan-javatra mihaja sy ny fomba fiainan'ny mpanan-karena indray dia manaiky aho hoe tsy manana na inona na inona. […]
Kanefa io fiainana tsotsotra io no mahasalama ahy sy mahasambatra ahy. Mijery fitaratra aho amin'ny maraina, dia hitako mihamanjavona ny ketroketrona amin'ny hoditro nohon'ny hamandoana be loatra eto amin'ity firenena ity, mampatanjaka ahy ny fanatanjahan-tena ataoko isan'andro, ny fahaizako mandanjalanja tsara ny fihinanana zavatra matavy sy ny sakafo be menaka dia manampy ahy tsara hitazona ny bikako. Zavatra farany nefa manan-danja indrindra ny fiaraha-monina tsy misy rarintsaina dia manampy ahy hanana fanantenana hatrany sy hanana fomba fijery mankamin'ny lafin-javatra tsara hatrany eo amin'ny fiainana. Mahatsapa tena ho mihatanora sy mihasambatra lalandava aho isan'andro.
Mety miaina anaty nofy angamba aho. […]
Mpirotsaka an-tsitrapo iray avy amin'ny PCV nisafidy voankazo namainina teo amin'ny tsenan'i Aberbaijan.
Ao anatin'ny lahatsoratra iray mitovitovy amin'io, ao amin'ny blaogy izay mitondra ny lohateny hoe ‘ Any amin'ny tanin'ny afo, mpirotsaka an-tsitrapo taloha iray tao amin'ny PCV dia namerimberina ireo fahatsiarovana nahafinaritra azy indrindra nandritra ny 3 taona mahery niainany tao Azerbaijan ary tao anatin'ireo fotoana ireo no nametrahany ireo zava-drehetra laharam-pahamehany indrindra eo amin'ny fiainana.
[…] Hitako hoe maromaro ihany ireo zavatra madinidinika ahalahelovako an'i Azerbaijan ary somary malahelo aho raha manao fanoharana izany amin'ny fiainana any Etazonia. Matetika dia mahatsapa tena ho tsy eto an-toerana aho satria ela dia ela mihitsy no niainako tany am-pitan-dranomasina. […]
Malahelo ny vokatra izay vaovao sy mora vidy isan'andro aho . Malahelo ireo fiara mpitatitra vahoaka izay ratsy endrika sy efa tonta aho sy ny fomba fitondran'ny mpamily fiara izay miridana mafy tsy amin'antony kanefa mahatonga ahy any amin'izay tanana rehetra tiako aleha amin'ny sarany 0.20 qepik fotsiny. […] Manimanina ny fananako anton'asa iray aho, toerana iray aleha ahafahako maneho ny lanjako sy ny hasiko, ary ahatsapako hoe manan-danja sy misy dikany ny asako. Manimanina ny lehibeko sy ireo mpanenjika ahy any am-piasana aho. Malahelo ny toerana alehako isan'andro aho. […] Ary malahelo ny fihavanana nananako tamin'ny mpiara-belona amiko aho.
Matetika izahay mponina aty Amerika dia manana fahazarana hieritreritra hoe tsaratsara kokoa ny fiainana eto noho ny any amin'ny toeran-kafa. […] Nefa amim-pahatsorana no ilazako fa nahatsapa aho ary mbola mahatsapa hatramin'izao fa tsotsotra kokoa ny fiainana any Azerbaijan. Fotoana iray nianarako nitia ny asako ny nitoerako tany, nahafahako namantatra ireo zavatra tiako indrindra eo amin'ny fiainako, ary fotoana nahaizako nankafy ny fiainana sy ireo zavatra rehetra ao anatiny. Somary nahatsapa “alahelo ny tanindrazana” kely ho an'i Azerbaijan aho.
Eny tsy azo lavina fa ho an'ireo vahiny, ny fiainana any amin'ny firenena toa an'i Azerbaijan dia mora kokoa ny ahitana tombontsoa raha oharina amin'ny ankamaroan'ireo mponina ao an-toerana izay mbola miaina anaty fahasahiranana hatrany, kanefa mampiseho ny lokon'ny fiainana izy ireo izay matetika noheverina ho zo ary adino avy eo nandritra ny fotoan-tsarotra tamin'ny tetezamita.